विरामीको ज्यान जाने घटना घट्ने सवालमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराकै नम्बर वान अस्पताल | Jukson
पटक पटक लापरबाहि गरेको कारणले विरामीको ज्यान गएको भन्ने विषयमा मुछिदै आएको गण्डकी मेडिकल कलेज पुनः अर्को घटनामा मुछिएको छ । सोमबार विहान एलिश सुनार नामको ८ महिने बालकको ज्यान गएपछि अस्पतालले लापरबाहि गरेको भन्दै आफन्तहरुले विरोध जनाएका छन् ।
युवा व्यवसायी तथा संगीतकार जीवन सुनारको ८ महिने छोराको मृत्यु भएको हो । मुटुमा केहि समस्या भएका बालकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि अभिभावकले उपचारका लागि त्यहाँ पु¥याएका थिए । यद्यपी अस्पतालले आवश्यक उपचारमा ध्यान नदिँदा वच्चाले ज्यान गुमाएको बालकका बुवा जीवन सुनारले बताएका छन् ।
आईतबार राती साढे ९ बजे अस्पताल पु¥याएका बालक विहान साढे ७ बजे मृत भएको अस्पतालले घोषणा गरेको थियो । आठ महिने बालक एलिश सुनारका बुवा जीवन सुनार आफु पिडित भएको बताउँछन् । ‘छोरो राती अस्पताल पु¥याउने बेलामा ठिकै थियो । यस्तो होला भन्ने मैले सोँचेको पनि थिईन ।’ उनले भने–‘अस्पतालको लापरबाहिको कारणले मेरो नाबालक छोरोको ज्यान गयो ।’
घटनाक्रम अनुसार वच्चालाई गण्डकी मेडिकल कलेजको ईमेरजेन्सीमा पु¥याएपछि त्यहाँ उसलाई एउटा सुई दिईएको थियो । त्यसपछि बच्चालाई केहि सन्चो भएको थियो । फेरि केहि च्यापेपछि ईमेरजेन्सीले वच्चालाई आईसियु रिफर ग¥यो । आईसियुमा पुगेपछि वच्चालाई सलाईन चढाउन उसको नशा खोज्ने क्रम चल्यो । र, अथक प्रयास गर्दा पनि नशा फेला नपरेपछि शरिरका विभिन्न ठाऊँमा भएपनि नशा खोज्न थाले नर्सहरुले । केहि नलागेपछि वच्चालाई अक्सिजन दिएर राखियो ।
‘बच्चाको अवस्था जटिल बन्दै गएपनि रातभर डाक्टर आएनन् । र, त्यहाँ भएका नर्स अनि डाक्टरले पनि खासै वास्ता गरेनन् ।’ बच्चाका बुवा जीवनले भने–‘मैले ल्याएका औषधी र सलाईनका सामानहरु कुनै पनि प्रयोग भएनन् ।’ विहानपख बच्चाको मृत्यु भएको उनले सुनाए । र, वच्चाको मृत्यु भैसकेपछि मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर आईपुगेको उनले बताए । ‘म पिडित भएँ । यदि अस्पतालले बेलैमा सकेको गरेको भए मेरो छोरो बाँच्थ्यो होला ।’
अस्पताल प्रशासनले पनि बालकको ज्यान जानुमा आफुहरुको कमजोरी भएको हुनसक्ने मौन स्विकृति जनाएको छ । यद्यपी वच्चाको ज्यान जानुमा उसमा भएको मुटु रोग प्रमुख कारण भएको उसले बताएको छ । प्रशासनले आईसियुमा भएको बच्चाले उपचार नपाउनुको कारण बारे भने केहि बोल्न सक्दैन । बालरोग विशेषज्ञ विनोद तुलाचनले वच्चा मुटुकै रोगको कारणले मरेको बताए । ईमेरजेन्सीमा वच्चालाई उपचार गरेका अर्का डाक्टर नविन ढकालले पनि तुलाचनकै कुरालाई सहि थापे ।
गण्डकी मेडिकल कलेजको लापरबाहिको कारणले विरामीको ज्यान गएको भन्ने घटना यो नयाँ होईन । यसअघि पनि धेरैपटक गण्डकी मेडिकल कलेजलाई यस्तो खाले आरोप लाग्दै आएको छ । अझै भन्नुपर्दा लापरबाहिकै कारणले विरामीको ज्यान जाने घटना घट्ने सवालमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराकै नम्बर वान अस्पताल हो भन्दा फरक नपर्ला । यसको नियमन कसले गर्ने ? केहि सोँच्ने हो की ?
धादिङलाई केन्द्र बनाएर ४.५ को पराकम्पन
बाबु–छोराबीच झगडा, रिसको झोंकमा छोराले घरमै आगो लगाए
मधेश रक्षाबन्धनको साङ्गितिक धुनले गुञ्जायमान
"पाँचौ मिस तमुस्यो नेपाल - २०१६ " आयोजना हुने,अडिसन कहाँं कहाँं हुँदैछ ? हेर्नु होला ।